MOOC-gan waxaa loogu talagalay ardayda isu diyaarinaysa imtixaan gelitaanka si ay u bartaan caafimaadka ama cilmiga kale ee nolosha, ardayda mustaqbalka ee kimistariga, farmashiyaha, bayoolajiga, cilmiga dhulka ama injineernimada. Waxa kale oo ay awood u siinaysaa dhalliilaha lagu arkay bilowga waxbarashada sare in sida ugu dhakhsaha badan loo buuxiyo. Ugu dambeyntii, waxay u oggolaan doontaa qof kasta oo xiiseeya inuu si fiican u fahmo adduunka ku hareeraysan iyo inuu ogaado aasaaska sayniska xiisaha leh. Dhamaadka MOOC-gan, ka qaybgalayaashu waxay awood u yeelan doonaan inay la xidhiidhaan sifooyinka macroscopic ee maadada atamka iyo hab-dhaqankeeda molecular waxayna baran doonaan aasaaska kimisteriga tirada, dheellitirka kiimikaad iyo falcelinta dib-u-celinta.
MOOC-gan waxaa loogu talagalay ardayda isu diyaarinaysa imtixaan gelitaanka si ay u bartaan caafimaadka ama cilmiga kale ee nolosha, ardayda mustaqbalka ee kimistariga, farmashiyaha, bayoolajiga, cilmiga dhulka ama injineernimada. Waxa kale oo ay awood u siinaysaa dhalliilaha lagu arkay bilowga waxbarashada sare in sida ugu dhakhsaha badan loo buuxiyo. Ugu dambeyntii, waxay u oggolaan doontaa qof kasta oo xiiseeya inuu si fiican u fahmo adduunka ku hareeraysan iyo inuu ogaado aasaaska sayniska xiisaha leh.
Chemistry: u fur albaabada tacliinta sare! Diisambar 16, 2021Tranquillus
READ Ururinta Jirka: 1- Korontada
Dhulalka iyo horumarka: aynu beddelno wakhtiyada!